Nkọwa banyere Oziọma taa 20 Jenụwarị 2021 nke Don Luigi Maria Epicoco | Ahụrụ m Jizọs n'anya
Nkọwa banyere Oziọma taa 20 Jenụwarị 2021 nke Don Luigi Maria Epicoco dere
Ọnọdụ ahụ a kọrọ n’Oziọma taa dị ezigbo mkpa. Jesus odụk synagogue. Arụmụka a na-arụrịta ụka n'etiti ya na ndị edemede na ndị Farisii apụtawo ìhè. Otú ọ dị, n'oge a, ọ bụghị banyere okwu mmụta ma ọ bụ nkọwa nke mmụta mmụta okpukpe, ọ bụghị ahụhụ ndị mmadụ na-ata:
“O nwere otu nwoke aka ya kpọnwụrụ akpọnwụ, ha na-ele ya anya ka ọ mara ma ọ̀ ga-agwọ ya n’ụbọchị izu ike ma bo ya ebubo. Ọ gwara nwoke ahụ aka ya kpọnwụrụ akpọnwụ, sị: "Banye n'etiti!"
Naanị Jizọs yiri ka ọ na-ewere ahụhụ nwoke a na-ata. Ndị ọzọ niile na-eche naanị maka ịbụ ndị ezi omume. A bit dị ka ọ na-eme anyị na anyị na-eleghara ihe dị mkpa n'ihi ọchịchọ nke ziri ezi. Jizọs kwupụtara na mmalite ga-abụrịrị ngwongwo nke onye nke ọzọ. Enwere ihe karịrị Iwu ọ bụla ma ọ bụ mmadụ. Ọ bụrụ n’ichefu nke a, ị nwere ike ịbụ ndị okwukwe okpukperechi. Nzube nke ala abụghị naanị ihe na-emerụ ahụ ma ọ gbasara okpukpe ndị ọzọ, mana ọ dịkwa egwu mgbe ọ metụtara nke anyị. Anyị ga-abụ onye isi mgbe anyị na-eleghara ndụ ndị mmadụ anya, nhụjuanya ha siri ike, ịdị adị ha n'akụkọ ihe mere eme na otu ọnọdụ. Jizọs debere ndị mmadụ n'etiti, ma n'Oziọma nke oge a ọ bụghị nanị na ime nke a kama ọ bụ ịjụ ndị ọzọ okwu site na omume a:
“Mgbe ahụ ọ jụrụ ha, 'Iwu ọ kwadoro ime ihe ọma ma ọ bụ ihe ọjọọ n'ụbọchị izu ike, ịzọpụta ndụ ka ọ bụ iwepụ ya?' Ma ha kpuchiri ọnu. Mb lookinge O lesiri ha anya gburugburu dika iwe, o wutere ha na obi-ha siri ike, O we si nwoke ahu, Setipu aka-gi. Ọ gbatịa ya wee gwọọ ya. Ndi-Farisi we pua ngwa ngwa soro ndi Herod, bdia ìzù imegide ya ime ka ọ nwua.
Ọ ga-adị mma ma anyị chee ebe anyị nọ akụkọ a. Ànyị na-atụgharị uche dị ka Jizọs ka ànyị na-eme ka ndị odeakwụkwọ na ndị Farisii? Karịsịa, anyị ghọtara na Jizọs na-eme ihe a niile n'ihi na nwoke ahụ aka ya kpọnwụrụ akpọnwụ abụghị onye ọbịa, mana ọ bụ m, ọ bụ gị?
Ntụgharị uche nke ụbọchị ahụ: Rịọ oge nke ezi ekpere